(ူမန်မာူ့ပည်ူပန်ရောက်လာတဲ့ ၀န်ုကီးခဵပြ် သိန်းစိန် နဲႚ လာုကိသြူ နအဖ စစ်အာဏာပိုင်အဖြဲႚမြ သန်းရြေ နဲႚ မောင်အေး - Photo AFP)
ိုံဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ - စက်တင်ဘာလအတငြ်း သံဃာတော်မဵာိးံငြ့်ူပည်သူမဵား၏ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆို ဆိံ္ဋူပပြဲအပေၞုကမ်းတမ်းစြာူဖိခြဲမကြိုိုံင်ငံတကာက မဵက်ဝၝးထင်ထင်ူမင်တြေႚခငြ့်ရလိုက်ူပီး၊ ၂လ အုကာမြာ စစ်အစိုးရကူဂိလ်ြတုစလောင်းမဵားကို လိုက်လံစစ်ဆေး စာရင်းမတ်ြယူနေပၝတယ်။ ရန်ကုန်ူမြိႚတငြ်ူးမြိႚနယ်မဵားအားလုံးမြာ စစ်ဆေးမြ မစတင်သေးပေမယ့်၊ ပုစန်ြတောင်၊ မဂဿလာတောင်ညနြ်ႚ နဲႚုကည့်ူမင်တိုင်ူမြိႚနယ်မဵားက ရပ်ကကြ် အခဵြိႚမြာ စာရင်းစတင် ကောက်ခံနေူပီူဖစ်ပၝတယ်။
ိုံဝင်ဘာ ၂၂။ ၂၀၀၇ - စက်တင်ဘာ ဆိံ္ဋူပပြဲမဵာူးပီးဆုံးခဵိန်က စူပီူးပည်တငြ်းပြုိံိံပ် မီဒီယာမဵားရဲႚ စောင်ရေ သိသာစြာ ကဵဆင်းလာနေခဲ့တယ်လိုႚ အယ်ဒီတာအခဵြိႚကေူပာပၝတယ်။ အထူးသူဖင့်ကတော့ အပတ်စဉ် သတင်းဂဵာနယ်မဵားမြာ သိသာတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။
” လူတေကြ ဆိံ္ဋူပမနြဲႚိုံင်ငံရေးသတင်းတေကြိုပဲ စိတ်ဝင်စားနေုကတယ်။ူပည်တငြ်း ဂဵာနယ်တေကြ ဒၝတေကြို ဖော်ူပခငြ့် မရုကဘူး။ အဲသည်တော့ သူတိုႚက ရေဒီယိုနဲႚူဂိလ်ြတု ရုပ်သံ သတင်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နေုကတယ်။ တဘက်ကလည်း စီးပြားရေးက သိပ်ခဋ္ဋတ်ူခြံကဵ လာတော့၊ လူတေကြ ဂဵာနယ် မဂ္ဂဇင်းတြေ သိပ် မဖတ်ိုံင်ုကတော့ဘူး" လိုႚ အပတ်စဉ် သတင်းဂဵာနယ် တစောင်က လူငယ်အယ်ဒီတာ တဦးက ဆိုပၝတယ်။
ိုံဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ - လူႚအခငြ့်အရေး ကိုယ်စားလယြ် ပီညဲရိုး ရန်ကုန်ကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ သတင်းကို မဵက်ြိာံဖုံးမြာ ရိုက်ြိံပ်ခဲ့တဲ့7Day အပတ်စဉ် သတင်းဂဵာနယ် ယခုအပတ် အဖုံးမဵားကိုပန်လည် ရိုက်ြိံပ်ခဲ့ရတယ်လိုႚ စာပေစိစစ်ရေး ၀င်ထက်ြနေသူ အယ်ဒီတာ တဦးကေူပာပၝတယ်။ စာပေစိစစ်ရေိးံငြ့် မတ်ြပုံတင်ဌာနက ခငြ့်ူပြူပီူးဖစ်ပေမယ့်၊ နောက်ဆုံးအခဵိန်မြာမြ ကပ်ူပီး သတင်းကို ခဵန်ခဲ့ဖိုႚ တာူးမစ်ခဵိန်မြာ7Day က အဖုံးမဵားကို ရိုက်ြိံပ်ူပီူးဖစ်နေပၝူပီ လိုႚ ဆိုပၝတယ်။ စိစစ်ရေးမြးမဵားနဲႚ ညနြ်ုကားရေးမြးမဵားကို ညြိံင်းပေမယ့် မအောင်ူမင်တဲ့အဆုံးမြာ ဂဵာနယ်ဟယ အဖုံးစာမဵက်ြိာံမဵာူးပန်ရိုက်ခဲ့ရတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။
ိုံဝင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ - စက်တင်ဘာလအတငြ်ူးငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပမမြဵားအပေၞ အုကမ်းဖက်ူဖိခြဲခဲူ့ပီိးံစ်ြလ အုကာ ရန်ကုန်က ကလေးငယ်မဵားအုကားမြာ တဘောင်တခု ရတ်ြဆိုနေုကတယ်လိုႚ ကေဵာင်းဆရာ တဦးက ဆိုပၝတယ်။ ရပ်ကက်ြအခဵြိႚက ကလေးငယ်မဵားဟာေူပးလြားဆော့ကစားရင်း - "ုကက်ဆူဆီထကြ်၊ စုကည်တက် …" လိုႚ ရတ်ြဆိုနေုကတယ် လိုႚ ဆိုပၝတယ်။
ိုံဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ - ၂၀၀၇ိံစ်ြဟာူမန်မိာိုံင်ငံကိုိုံင်ငူံခားသား ခရီးသည်မဵား လာရောက်လည်ပတ်မြ အနည်းဆုံိးံစြ်ူဖစ်တယ်လိုႚ ခရီးသြား အေဂဵင်စီတစ်ခု က ဆိုလိုက်ပၝတယ်။ အထူးသူဖင့် စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းအူပီး ခရီးသြားမဵားဟာ သူတိုႚရဲႚူမန်မာူပည်ခရီးစဉ်တေကြို ဖဵက်သိမ်းခဲု့ကတယ်လိုႚ အဆိုပၝ အေဂဵင်စီရဲႚ မန်နေဂဵာ အမဵြိးသမီးကေူပာပၝတယ်။
"Exotissimo တိုႚ၊ Diethelm တိုႚလို ခရီးသြား ကုမဍ္ဎဏီတေမြာတောင် Booking လုပ်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်တေရြဲႚ ၇၀ % ကို ဆုံးရြံးသြာုးကတယ်။ ကဵမတိုႚ အလတ်စား ကုမဍ္ဎဏီတေကြတော့ အောက်တိုဘာလကစူပီး ခရီးသြား တယောက်မြ မရြိတော့ဘူး။" လိုႚ သူမက ညည်းညပြၝတယ်။ ခရီးသြား အေဂဵင်စီမဵားသာမက ဟိုတယ်ုကီးမဵားပၝ ခရီးသည်မဵား မရြိလိုႚ စိတ်ပဵက်နေုကတယ်လိုႚ လည်းေူပာူပပၝသေးတယ်။ " ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်ုကီးတေမြာတောင် ဧည့်သည် အယောက် ၂၀ လောက်ပဲ ရြိတယ်" လိုႚ သူမက ထပ်လောင်းေူပာပၝတယ်။ ခရီးသြားလုပ်ငန်းမဵားကို မြီခိုနေရတဲ့ အူခာ်းစီးပြားရေး လုပ်ငန်းမဵားလည်း ကဵဆင်းလာနေပၝတယ်။
"ကဵမတိုႚ ဒီမြာ ဆိုင်ဖငြ့်တာ ၅ိံစ်ြရြိူပီ။ ဒီိံစြ် ခရီးသြား အနည်းဆုံးပဲ" လိုႚ ငေဆြောင် အပန်းေူဖ ကမ်းေူခမြာ ထမင်းဆိုင်ဖငြ့်သူ အမဵြိးသမီးတဦးက ဆိုပၝတယ်။
Thank you for your page with reports from Moemaka (Yangon). We would like to hear voices from inside the country more regularly. Millions of people are standing with people inside Burma (Myanmar).